Hosokafan'i Aostralia ny sisin-taniny amin'ireo mpandeha vaksiny feno
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Hosokafan'i Aostralia ny sisin-taniny amin'ireo mpandeha vaksiny feno
Airlines • Airport • Vaovao Mafampana Aostralianina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fialan-tsasatr'i Aostralia tamin'ny famerana ny fivezivezena dia tonga na dia eo aza ny tanàna roa lehibe indrindra misy azy, Melbourne sy Sydney, ary ny renivohiny, Canberra, mijanona am-baravarana noho ny fitomboan'ny tranga niseho tany amin'ireo tanàna an-tanàn-dehibe tamin'ny fiandohan'ny taona.
Ny fanalefahana ny fameperana dia hahafahan'ny olom-pirenena mandeha any ivelany rehefa tonga 80% ny tahan'ny vaksinim-panjakana
Amin'izao fotoana izao, ny olona dia tsy afaka miala any Aostralia afa-tsy amin'ny antony miavaka, ao anatin'izany ny asa ilaina na mitsidika olona iray ao amin'ny fianakaviana izay marary efa ho faty.
Ny fiverenana any Aostralia dia voafetra ankehitriny amin'ny quota fahatongavana fatratra ary izay miverina eto amin'ny firenena dia tsy maintsy iharan'ny quarantine hotely mandritra ny 14 andro.
Tamin'ny volana martsa 2020 dia nanidy ny sisintaniny i Aostralia tamin'ny volana martsa XNUMX, mandrara ny olom-pireneny sy ny mponina ao aminy tsy hivezivezy any ivelany tsy nahazo alalana ofisialy ary namela Aostraliana an'arivony nigadra tany ivelany.
Ny praiminisitra Aostraliana Scott Morrison
"Fotoana izao hamerenana ny aostralianina ny ain'izy ireo," hoy ny praiminisitra Scott Morrison, androany, nanambara izany Aostralia hanomboka hanamora ny fameperana henjana napetrany teo am-piandohan'ny areti-mandringana COVID-19, izay mamela ny olom-pirenena vita vaksiny handeha amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny fanalefahana ny fameperana sisintany COVID-19 dia hahafahan'ny olom-pirenena aostralianina mivezivezy any ivelany rehefa tonga 80% ny tahan'ny vaksinim-panjakana - tanjona napetraka manerana ny firenena mba hiantohana fa tsy hanenika ny toeram-pitsaboana ny fipoahan'ny virus.
Amin'izao fotoana izao, New South Wales no fanjakana akaiky indrindra io tokonam-baravarana io, izay voatendry hahatratra azy ao anatin'ny herinandro, ary i Victoria kosa no andrasana ho faharoa hanefa ny fepetra takiana.
Amin'izao fotoana izao, ny olona dia tsy afaka mivezivezy afa-tsy Aostralia noho ny antony tsy manam-paharoa, ao anatin'izany ny asa ilaina na ny fitsidihana mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana izay marary efa ho faty. Ny fiverenana any Aostralia dia fehin'ny quota fahatongavana henjana ary ireo izay miverina any amin'ny firenena dia tsy maintsy iharan'ny quarantine hotely mandritra ny 14 andro.
Nilaza koa i Morrison fa, ary koa hanamora ny fivezivezena amin'ny olona vita vaksiny, ny fepetra quarantine amin'ny hotely - izay mitentina AUS $ 3,000 ($ 2,100) - dia hovonoina ary soloina fitokanana fito andro ao an-trano.
Tsy hipetraka eo noho eo ireo olona miditra vahiny, na dia nilaza aza ny governemanta fa miasa izy ireo mba hahazoana antoka fa “handray ny mpizahatany hiverina aty amorontsiraka” ity firenena ity.
AostraliaNy fanalefahana ampahany amin'ny fameperana fivezivezena dia tonga na dia eo aza ny tanàna roa lehibe indrindra misy azy, Melbourne sy Sydney, ary ny renivohiny, Canberra, mijanona am-baravarana noho ny fitomboan'ny tranga niseho tany amin'ireo hubs an-tanàn-dehibe tamin'ny voalohan'ny taona.